चितुवा आतंक : आठ वर्षमा २५ को ज्यान गयो « Anumodan National Daily
चितुवा आतंक : आठ वर्षमा २५ को ज्यान गयो
प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १२:०३
बैतडी । चितुवाले बैतडीको तल्लो स्वराडमा पछिल्ला ८ बर्षमा २५ जनाको ज्यान लिएको छ । मंगलबार बिहान ४ बजे मैलौलीमा चितुवाको आक्रमणबाट एक बालिकाको ज्यान गएपछि यो संख्या २५ पुगेको छ । जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–९ असुरका रामबहादुर लुहारकी ८ वर्षीया छोरी सीताको चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गएको हो ।
ओछ्यानमा सुतेकै अवस्थामा चितुवाले आक्रमण गरि लगेको र घर नजिकै ५०० मिटर पर सिताको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख डिएसपी डिल्लीनारायाण पण्डेयले जानकारी दिएका छन् ।
गत बुधबार पनि राति एक्कासि तलोस्वोराडमा नै पर्ने जिल्लाको शिवनाथ गाउ“पालिका– ४, खडितका १५ वर्षीय हर्कबहादुर साउदलाई चितुवाले आक्रमण गर्यो ।
साउदलाई चितुवाले आक्रमण गरेको थाहा पाएर स्थानीयले होहल्ला गरे । स्थानीयहरूले होहल्ला गरेपछि चितुवाले उनलाई घाइते बनाएर मात्र छाड्यो ।
२०७४ भदौ महिनामा मेलौली नगरपालिका– ९ असुरकी ४० वर्षीया कुन्दादेवी भट्ट बिहान ९ बजेतिर घरनजिकै मकैबारीमा घाँस काटिरहेकी थिइन् । एक्कासि चितुवाले भट्टको नाक र बायाँ हातमा चिथोरेर घाइते बनायो ।
गत २० भदौ साँझ मात्रै शिवनाथ गाउ“पालिका–२, टाडिखर्कका ७ वर्षीय सुदीप मडैको घर आ“गनमा खेलिरहेका बेला चितुवाको आक्रमणबाटै ज्यान गएको थियो । उनी मात्र होइन, २०७३ भदौमा चितुवाले आक्रमण गरेर २ बालिकाको ज्यानसमेत लिएको थियो ।
२०६८ सालयता बैतडीको तल्लो स्वराडमा चितुवाको आक्रमणबाट २५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २४ जना घाइते भएका छन् । पछिल्लो समय फेरि तल्लो स्वराडका केही ठाउ“हरूमा नरभक्षी चितुवाको त्रास फैलिँदै छ ।
राज्य पक्षबाट समेत हेपिएको भनेर भनिने बैतडीको दक्षिणी क्षेत्र तल्लो स्वराडमा चितुवाले आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा डरले घरभित्रै दिसा पिसाब गर्न बाध्य रहेको स्थानीय नारायण राम सार्कीले बताए । नरभक्षी चितुवाले यहा“का स्थानीयलाई पटक–पटक आक्रमण गर्ने गरेको भए पनि चितुवालाई कसैले नियन्त्रणमा लिन भने सकेका छैनन् ।
विगतमा चितुवालाई नियन्त्रणमा लिन ठुलो संख्या हातहतीयार सहितका सुरक्षाकर्मी खटाएपनी नियन्त्रण लिन नसकिएको शिवनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए । उनले भने, ‘विगतमा म शिक्षक हुँदा पनि स्थानीय र हातहतीयार सहितको प्रहरी टोली खटाएको थियो चितुवा नियन्त्रण बाहिर नै छ ।’
बैतडीका हरेक क्षेत्रमा अहिले चितुवाबाट समाधान लगायतका सचेतनामुलक बोर्डहरु राखिएका छन् ।
चितुवाले बैतडीको तल्लो स्वराडमा आतंक मच्चाउन थालेपछि त्यहा“का स्थानीय अहिले त्रसित छन् । घर आ“गनमा खेलिरहेका बच्चालाई तथा खेतमा काम गरिरहेका बेलासमेत चितुवाले कुन बेला आक्रमण गर्छ र ज्यान लिन्छ भन्ने चिन्ताले यहाँका स्थानीयलाई पिरोलिरहेको हुन्छ ।
घरआँगनमै मानिसलाई आक्रमण गर्ने नरभक्षी चितुवाले यस क्षेत्रका स्थानीहरूले पालेका भेडा–बाख्रासमेत बाँकी राखेको छैन । स्थानीय दीपकबहादुर चन्दले विदेशमा काम गर्नुभन्दा त आफनै ठाउँमा केही गरौं भनेर बाख्रा पालन व्यवसाय गरे ।
उनले एक÷डेढ सय बाख्रा पालेका थिए । उनले पालेकामध्ये ५०्६० बाख्रा चितुवाले खाएपछि उनले अहिले बाख्रापालन व्यावसाय छाडिसकेका छन् । सरकारले चितुवा नियन्त्रणमा पहल नगरेकाले आफनो साँझ–बिहानको छा“क टार्नसमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले चितुवा नियन्त्रण गर्ने बासस्थान सर्च गर्नुपर्छ । चितुवा नियन्त्रण गर्ने सक्ने व्यक्ति यस ठाउ“मा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चितुवा नियन्त्रण गर्न भनेर आउ“छन् । तर, नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । चितुवा नियन्त्रण गर्ने निहुँमा चियापानी खाएर मात्र हु“दैन ।
फेरी चितुवा मार्ने अनुमति दिन स्थानीयको माग
२५ जनाको चितुवाले ज्यान लिइसक्दा पनि सरकारले चितुवा नियन्त्रण गर्ने पहल नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् ।
चितुवाले धेरैको ज्यान लिएपछि त्रसित नागरिकले चितुवा मार्न पटक–पटक स्थानीय प्रशासनसँग माग गर्दा प्रशासनले प्रहरी परिचालन गर्दा समेत सिन्को भा“च्न नसकेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् ।
चितुवाले धेरैको कोख रित्याइसकेको छ भने धेरैको सिउ“दो मेटाइसकेको छ । मानवबस्ती पसेर चितुवाले आक्रमण गर्न थालेपछि तल्लोस्वराडका स्थानीयले चितुवा मार्न सरकारस“ग माग गरेका छन् ।
चितुवाका कारण आफूहरू त्रासमय वातावरणमा बाँच्न बाध्य भएको पञ्चेस्वर गाउ“पालिका–३ का वडा सदस्य कालुसिंह जोशीको भनाई छ ।
‘सरकारले चितुवा नियन्त्रण गर्न सकेन् । सरकारले सक्दैन भने हामी नियन्त्रण गछौ,’ उनले भने, ‘कि त सरकारले चितुवा मार्नुपर्छ, होइन भने हामीलाई मार्ने अनुमति दिनुपर्छ ।’
बेलुकाको खाना दिउँसै
कतिबेला चितुवा आउँछ र आक्रमण गर्छ भन्ने त्रासमा यहाँका स्थानीय छन् । खेतबारीमा काम गर्न गयो भने चितुवाले आक्रमण गर्छ कि भन्ने डर मान्नुपर्छ ।
विगत १० र १२ वर्षदेखि पञ्चेस्वर, विशालपुर र शिवनाथ लगायतका स्थानमा नरभक्षी चितुवाको बिगबिगी धेरै बढेको कुलाउ माध्मीक बिद्यालय कुलाउका शिक्षक नरिदत्त भट्टले भने,‘कैयौ“ बालबालिकाको चितुवाले ज्यान लिएकोले यहाँका स्थानीयहरू काम छोड्न बाध्य छ ।’
‘बेलुकाको खाना पनि चितुवाको डरले दिउ“सै खान्छौ“ । चितुवा आएर आक्रमण गर्छ कि भनेर कोठा बन्द गरेर सुत्छौ“,’ उनले भने, ‘तर सरकारको ध्यान गएको छैन । अब स्थानीय सरकारमातहत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ“ ।’
संसदमा चितुवा नियन्त्रणको माग
बैतडीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित संघीय सांसद तथा पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीले समेत चितुवा नियन्त्रणका लागि सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
उता बैतडीको तल्सो सोराड क्षेत्रमा चितुवा आतंकको समस्या रहेकाले त्यस विषयमा आफूले संसदमा पटक–पटक कुरा उठाएको संघीय सांसद तथा पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बैतडी आउ“दासमेत आफूले चितुवा नियन्त्रणका बारेमा कुरा गरेको उनले बताए ।
अहिले आफू कैलालीमा रहेको र काठमाडौं जानेबितिक्कै सम्बन्धित निकायमा यसको बारेमा कुरा राख्ने उनको भनाइ छ ।
‘भारतले आफनोतिर सडक बाटो, विद्युतलगायतका थुप्रै संरचनाहरू निर्माण गरेको छ । भारततिर उज्यालो भयो । चितुवा अध्या“रोमा बस्छ,’ उनले भने, ‘नेपालतिर अध्या“रो भएकाले चितुवा नेपालतिर आएको अध्ययनले देखाएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि हामी दीर्घकालीन उपाय के हुन सक्छन् ? भनेर गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौ“ ।’
के गर्दै छ डिभिजन वन कार्यालय ?
डिभिजन वन कार्यालय बैतडीलाई नरभक्षी चितुवा नियन्त्रण गर्नेका लागि आग्रह गरिसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालले बताएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पत्राचार गरेको छ ।
‘अहिले चितुवाबाट बच्नका लागि डिभिजन वन कार्यालय सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ । जिल्लाका सुरक्षासम्बद्ध निकायहरूले त्यस क्षेत्रमा अनुगमन गरेको थियो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आन्दत पौडेलले भने, ‘पीडितहरूलाई हामीले क्षतिपूर्ति पनि दिएका छौ“ । स्थानीयले चितुवा मार्न पाउनुपर्छ भनेका छन् । हामीले मार्न दिनेभन्दा पनि वन कार्यालयले दिने हो ।’